Ọgba aghara na-ada mba na Paris na ihe gbasara COVID-19 Jabs na Health Passes
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na France » Ọgba aghara na-ada mba na Paris na ihe gbasara COVID-19 Jabs na Health Passes
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ọgba aghara na-ada mba na Paris maka iwu COVID-19 jabs na ikike ahụike
“Thegabiga agaghị agabiga!” bụ abụ ndị na-eme ngagharị iwe na-agba gburugburu ụlọ ọrụ ahụ na Nantes.
Emere ngagharị iwe na France niile n’ụbọchị Bastille.
Ọgba aghara kpụ ọkụ n'ọnụ dị n'etiti ndị ngagharị iwe na ndị uwe ojii na Paris.
Ndị uwe ojii gbara gas ndị na-agba anya mmiri na ndị na-eme ngagharị iwe na-atụba okwute na karama, na-esunye ihe owuwu ọkụ na Paris, na ụlọ ndị ọchịchị chọrọ.
Ọtụtụ puku ndị ngagharị iwe abanyela n'okporo ámá ndị Paris iji gosipụta megide Mkpebi gọọmentị France iji mee ka ọgwụ mgbochi coronavirus dị mkpa maka ndị ọrụ ahụike yana iwebata akwụkwọ ikike iji nweta ụlọ mmanya, ụlọ nri, ebe nkiri na ebe ọha na eze.
Mass ngagharị iwe na mba niile mere na Bastille Day, ụbọchị ncheta nke 1789 oké ifufe nke ajọ ụlọ mkpọrọ Paris nke butere mgbanwe ọchịchị France. Na Paris, ndị uwe ojii gbara Gas anya mmiri iji gbochie ndị ngagharị iwe ahụ.
Eme ngagharị iwe gafere France na Wenesde na esemokwu kpụ ọkụ n'ọnụ na-adapụ na ndị uwe ojii na Paris. Ndị uwe ojii gbara gas ndị anya mmiri na ndị na-eme ngagharị iwe na-atụba okwute na karama, setịpụ ihe owuwu ọkụ na Paris, na ụlọ steeti steeti ndị agburu agbatu n'ofe France, na-azaghachi Onye isi ala Emmanuel Macron na-emegide mgbochi COVID-19.
Foto na vidiyo si n’isi obodo France gosiri ndị ngagharị iwe na-arụchi ụzọ si ihe eji achọta n’ebe ana-ewu ụlọ. O yikwara ka a gbara ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị na-enweghị nchekwa ile ọkụ.
Na Paris, ihe onyonyo ndị akaebe jidere ndị mmadụ na-agba ọsọ site na gas na-agba anya ka a na-etinye ndị uwe ojii n'ọtụtụ ọnụọgụ iji mebie ngagharị iwe ahụ. Enwere ike ịhụ nnukwu arịrịọ obodo site na ndị ngagharị iwe na ndị uwe ojii egbochi. N’otu oge, ụgbọ mmiri nke ihe na-agba anwụrụ ọkụ rutere n’akụkụ mbara ala nke ụlọ nri, na-eme ka ndị na-eri nri ghara ịbata n’ime.
Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze banyere ngagharị iwe gụnyere hashtags #PassSanitaire na #VaccinObligatoire, na-ezo aka na ọkwa Mọnde nke Macron na ndị ọrụ ahụike ga-enweta ọgwụ mgbochi megide COVID-19 site na Septemba 15, ma ọ bụ na-eche ọrụ ha ihu.
Obere ngagharị iwe mere n’ebe ọzọ n’obodo ahụ, ebe ụfọdụ ndị zukọrọ na Place de Clichy.
Ọ bụghị naanị Paris iwe iwe French. Vidio ndị si mba ahụ dum gosipụtara ngagharị iwe na Toulouse na Marseilles na ndịda, Haute-Savoie na ndịda ọwụwa anyanwụ, na Nantes na ọdịda anyanwụ, tinyere ebe ndị ọzọ.
Emekwara ngagharị iwe na Corsica, ebe ndị mmadụ gbakọtara ịkatọ ihe ha katọrọ dị ka mbuso agha na nnwere onwe mmadụ, na-achọ ikike "ịnwe nhọrọ ha" karịa ọgwụ mgbochi COVID-19.
Dabere na akụkọ sitere na ntanetị, ihe karịrị mmadụ 1,000 gara ije na obodo ndịda France na Perpignan.
Anyị bụ ndị mmadụ na-eme emume nke ọnwa Julaị 4, 2021